Ramanavy Tia Voankazo—Mpamboly Manana Elatra any Anaty Ala Mikitroka
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MILA mifidy tany tsara sy fotoana mety ny mpamboly, raha te hahita vokatra. Mahagaga anefa fa amin’ny alina no tena atao ny famafazana voa, any amin’ny alan’ny tany mafana. Tsy iza akory ny mpamboly fa ny karazana ramanavy mpihinana voankazo. *
Matetika ity karazana ramanavy ity no mandeha mitady sakafo amin’ny alina. Mikaroka eran’ny ala izy ireo, mba hahitana voankazo matsiro na voninkazo misy mamimbony. Sady mihinana izy ireo no mivoaka, ka avoakany izay voa na hoditra voankazo tsy levon’ny vavoniny! Miparitaka eran’ny ala ireny voa ireny, ary maniry avy eo. Mitety voninkazo koa izy ireo, ka mamindra ny vovobony rehefa mitsentsitra mamimbony. Tena mpamboly tokoa ry zareo!
Mandeha lavitra be ireo ramanavy rehefa mitady sakafo amin’ny alina, ka afaka manaparitaka voa amin’ny faritra ngezabe. Mandalo ao amin’ny tsinainy ireo voa ka tonga dia misy “zezika” vita ho azy, izay mahatonga azy ireny haniry tsara! Zavamaniry maro no mila ny ramanavy mba hanaparitaka ny voany, na hanakambana ny lahimbony amin’ny vavimbony.
Mivezivezy be ny ramanavy mpamboly, ka mila maso mahita tsara sy fahaizana manidina manokana. Mahita kokoa noho ny olona izy ireo ao anaty haizina, ary mahay manavaka loko mihitsy aza. Tsy sahirana mihitsy ry zareo, na mandeha alina na antoandro.
FANTATRAO VE? Tsy mampiasa onjam-peo toy ny ramanavy hafa ny ramanavy mpamboly rehefa mitady sakafo. Izay hitan’ny masony sy fofona reny kosa no amantarany azy. Ngezabe ny masony ka mahita tsara ry zareo amin’ny alina
Tsy miova vady mandra-pahafatiny ny ramanavy mpamboly any Samoa. Rehefa nodinihina ny karazany sasany, dia hita fa mikarakara tsara ny zanany ny ramanavy vavy. Trotroiny eny foana ny zanany mandritra ny herinandro vitsivitsy, ary tsy misara-nono mihitsy raha tsy efa tena lehibe. Hafakely aza ny zavatra hita tamin’ny karazana ramanavy roa. Misy ramanavy “rasazy” mantsy mikarakara ny ramanavy vavy rehefa hiteraka!
Mampalahelo anefa fa atahorana ho lany tamingana ireny ramanavy mpamboly ireny, satria simba ny ala. Tena ratsy ny vokatr’izany amin’ny zavamaniry sasany any amin’ny nosin’i Pasifika Atsimo. Toa tsy mety afindra mantsy ny vovobonin’izy ireny raha tsy misy an’ireo ramanavy. Zava-dehibe tokoa ny asan’ireny mpamboly manana elatra ireny!
^ feh. 2 Any Afrika, Aostralia, Azia, ary any amin’ny nosy sasany any Pasifika no ahitana an’io karazana ramanavy io.
MPIARO NY ALA
Iray andro sy iray alina fotsiny no mamelana ny baobaba. Vitan’ny ramanavy ao anatin’izay fotoana izay anefa ny asany. Tadiaviny ireo felany feno mamimbony, ka afindrany amin’ny baobaba hafa ny vovobony
Rehefa tapahina ny hazo any amin’ny alan’ny tany mafana, dia tena ilaina ny ramanavy mba hampaniry azy indray. Ny voa afafin’izy ireo mantsy no lasa hazo vaovao. Hoy ny boky Ny Ramanavy Eran-tany (anglisy), nosoratan’i Gary Graham: “Tsy handeha tsara ny fiainan’ny olona raha tsy maniry tsara ny ala. Tsy haniry tsara anefa ny ala, raha tsy eo ny ramanavy.”
Hizara Hizara Mpamboly Manana Elatra any Anaty Ala Mikitroka
g 10/14 p. 12-13